Ogaden News Agency (ONA) – Madaxda Wadamada Galbeedka Africa oo Taageeray Natiijada Doorashadii Gambia.
Madaxda Wadamada Galbeedka Africa oo Taageeray Natiijada Doorashadii Gambia.
Hogaamiyeyaasha ayaa sidoo kale madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari Iyo midka uu waqtigiisa sii dhamaanayo ee Ghana, John Dramani Mahama, ee doorashadii dhaweyd ee Ghana loogaga adkaaday, waxaa loo magacaabay in ay dhex-dhexaadiyaan xasaradaha ka aloosan dalka Gambia . Yaxya Jammeh, ayaa diiday natiijada doorashadii madaxtinimada ee la qabtay bilowgii bishan, todobaad kaddib markii uu aqbalay in laga adkaaday.
Madaxweynaha la doortay Mr Barrow ayaa ku eedeeyay madaxweynaha talada haya inuu dimuqraadiyadda waxyeelaynayo loona baahanyahay inuu aqbalo natiijada doorashada. Kooxda ku howlan la wareegidda xilka Mr Barrow ayaa sheegtay in madaxweynaha la doortay uu badqabo.